Rosia: Tantara telo momba fahantrana lalimpàka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Desambra 2009 17:18 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Français, Nederlands, Español, Italiano, Swahili, বাংলা, English
Niandry fiaran-dalamby adiny roa teo amin'ny toby fiantsonana ao Syzran, tanàna Rosiana ao amin'ny faritr'i Samara, ny mpanao gazety an-tsary Rosiana Oleg Klimov. Fotoana fohy teo, niresaka tamina olona vitsy izy ary nandrakitra an-tsoratra ny fahantrana lalimpàka mahazo ireo olona ireo (RUS) tao amin'ny blaoginy.
[…] Renim-pianakaviana iray, ny zanany vavy, sy ny zafikeliny lahy, 5 taona na mihoatra. Monina ao amin'io fiantsonan'ny fiaran-dalamby io efa roa andro izao. Tsy ampy 400 roubles (eo amin'ny. $13 eo ho eo) mba [hividianana tapakila] hodiana any an-tanànan'izy ireo, tsy lavitra an'i [Penza]. Avy nandevina. Miandry ramatoa havany ihany ho tonga avy any an-tanàna hitondra ireo 400 roubles. Tsy tonga anefa ity nandrasana – mety, satria tsy manam-bola koa izy. Nangataka [ahy] handefa hafatra [avy amin'ny findaiko] izy ireo. Olona tsotra. Mety tsy dia maranin-tsaina sy tsy dia nahita fianarana, nefa dia tsotra sy mahay zavatra. Hatsaràna izay tsy azo tsinontsinoavina amin'izao androntsika izao. 4,500 rubles eo ny vola raisin'ilay reniny [isam-bolana; eo amin'ny $148 eo ho eo]. Indraindray ny zanany vavy miasa any Penza, indraindray tsy mankany. Ilay zafikeliny tsy mba mankany amin'ny akaninjaza. [Satria] tsy misy akaninjaza. Nisy havany maty, nanangona ny vola rehetra nananany izy ireo ary nandevina azy. “Inona no atao? – Mila manao veloma farany amin'ny fomba mendrika ny maha-olona…” […]
[…] Vehivavy efatra avy amin'ny foko Tatar no tonga isan-kerinandro avy any an-tanànany mankao Syzran mba hitady vola. Raha mety ny tàntana, dia mahazo arivo [roubles; na $33 eo] izy efatra ireo mitambatra, amin'ny fanaovana asan'ny mpanampy eny amin'ireny trano iraisan'ny be sy ny maro ireny sy eny rehetra eny. Tsy misy asa any an-tanànan'izy ireo. “Misy asa, saingy tsy misy karama.” Indraindray tsy misy vola ividianana na dia mofo iray aza eny amin'izy ireo. Noho izany dia mividy lafarinina izy ireo ary dia manamboatra ny mofony. Mba hitsitsitsiana ny vola. Manana ny oviny manokana izy ireo. Sy voatangom-bazaha [concombres], ary laisoa. Nefa tsy manam-bola ry zareo. “Azo atao ny mivelona, fa tena sarotra. Mora kokoa ny mamoy aina…” […]
[…] Lehilahy iray, eo amin'ny 55 taona eo na latsaka kely. Noroahan'ireo zanany tao an-tranony izy. Ohatran'izao fotsiny: “Ento mandeha mivoaka any ny helo… Indraindray mipetraka any amin'ireo namako aho, ary indraindray ao amin'ny fiantsonan'ny fiaran-dalamby. Miasa etsy sy eroa …” Tsy milaza ny tenany ho mpirenireny izy, satria tsy misy mpirenireny anaty tanàna kely izany. Mitondra fanampiana ny olona.” Nahazo dite mangatsiaka tanaty tavoahangy plastika izy. Mofo sy hena baolina masiso voafono ao anaty vorodamba. Haniny miaraka amin'ny mofo ny hena baolina iray. Avy eo arahany an'ilay dite ary matory eo ambonin'ny dabilio ao amin'ny fiantsonan'ny fiaran-dalamby izy avy eo. Nahondriny eo an-tratrany fotsiny ny lohany dia natory izy. […]
Nofaranan'i Klimov tamin'ny fanamarihana mampihetsi-po ity lahatsorata ity, nanoratra izy hoe “tena mahatsiravina ny mijery ireny rehetra ireny,” ary tsy nisy tsy nahitàna tantara toy ireo ao anatin'ny “Rosia manjelatr'i Putin'”:
[…] Afaka mandany ora ora misimisy ao ianao ary manoratra tantara. Tsy asiana resa-be. Mihaino sy manoratra ny zavatra ifampiresahan'ny olona ao fotsiny. Tsotra be izany. Rehefa mety ho mpanao gazety dia afaka manao izany. Ary tsy ilàna fijerena fahaiza-mamakafaka akory[…]